ခင်မင်းဇော်: တို့နိုင်ငံ ပြည်အရေး
မြန်မာပြည်မှာ ကုလားဦးရေ မနည်းပါဘူး။ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေ နအဖနဲ့ လက်တွဲနေတာကို မျက်စိမှိတ်ထားတာ မမှန်ကန်ပါဘူး။ နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ မြန်မာတွေကို တစ်ယောက်မကျန်ပဲ လိုက်လံ ရှုံ့ချနေတဲ့အချိန်မှာ . . ကုလားအဖွဲ့တွေကိုပါ ဆန့်ကျင်မှ တရားပါမည်။ လက်တွေ့ကျပါမည်။ အထောက်အထားအဖြစ် အောက်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
p.s. အရင်ပို့စ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန် ဆန့်ကျင်ခွင့်ပေးတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစ်မ ကျန်းမာပါစေ
အမရေ နေကောင်းလား?အမရဲ့ စာစုလေးတွေကို ဖတ်
ပြီးတော့ အမရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့တစ်လေကို မြင်မိပါ
တယ်.ကိုမိုးသီးဆိုဒ်မှာ ကိုမြအေး သမီးလေး အင်္ဂလန်
မှာ ပြောသွားတာလေးတွေကို ဗွီဒီယို လေးနဲ့တင်ပေး
ထားတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မျက်ရည်တောင် ဝဲမိပါ
တယ် အမရယ်.အကုန်လုံးကို နားမလည်ပေမဲ့ တစ်ချို့
တစ်ဝက်လောက် နားလည်တာနဲ့တင် ကလေးမလေး
ပါတယ်.ပြောချင်တာကတော့ အမရယ် တစ်ခါတစ်လေ
ကျနော် ထင်တာပေါ့နော်.ကျနော်ဒို့ မြန်မာတွေရဲ့ သမိုင်း
ကြောင်းက ကောင်းတာတွေရှိသလို ဆိုးတာတွေက
လည်း တော်တော်များတယ် ထင်တာဘဲဗျာ။သမိုင်း
ရဟတ်ကတော့ တစ်ပါတ်လည်အုံးမှာပါ အမရယ်.ထိုင်စောင့်နေလို့တော့ မရဘူးပေါ့.
ဟုတ်ပါရက် အစ်မရယ် လွှတ်တော်ထဲကနေ ဘယ်လောက်မှ မရှိတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းလေးနဲ့၂၀၀၈ ဥပဒေ ကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်လေ လွှတ်တော်ထဲ က အာဏာရနေတဲ့ အနေအထားကို မဆိုထားနဲ့ညီလာခံ စကတည်းက ကော ၂၀၀၈ ဥပဒေ ဖြစ်လာမည့် စစ်ကျွန်ပြု ဥပဒေ ကို တင်ပြဆွေးနွေး ထောက်ပြနိုင်ခဲ့လို့ လား 5/96 နှင့် တုတ်နှောင်ထားတယ် အပစ်ရပ် အဖွဲ့ တွေ ပေါင်းပြီး တင်တဲ့ တင်သွင်းချက် ကို စဉ်းစားပေးပါမယ် လို့အချို သတ်ပြီး လစ်လျု ရှုခဲ့တယ် အဲဒါ အခု လို ရွေးကောက်ပွဲ က တက်လာတဲ့ အစိုးရပါလို့ပြောစရာ မရှိသေးတဲ့ အနေအထားမှာပါ ရွေးကောက်ပွဲက တက်လာတာပါလို့ပြောနိုင်လို့ ကတော့ ဆောရီး လို့ ပဲ ပြောမှာ ပါ။ ဒါတွေကို သိရက်သားနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၀၀၈ ဥပဒေ ကို ပြင်ဖို့စိတ်ကူးတာ စိတ်များ မှန်သေးရက်လား လို့ ပဲ မေးရတော့မယ်ထင်တယ် တကယ်တော့ ဆလိုင်းသန်းထွန်း ပြောသလို အစ်မ တွေးသလို တချက်ပဲလို တော့တယ် အဲဒါကတော့ ဒီအချိန်မှာ တခြားပါတီတွေကလည်း (ကြံဖွံ့နှင့် တစည မပါ) ရွေးကောက်ပွဲ ကို သပိတ်မှောက်လိုက် ကြဖို့ ပဲ။ ဒါဆို နအဖ သင်္ချိုင်းကုန်း ရောက်သွားမှာ သေချာတယ်။
မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေဆိုရင် DKBA ကို နအဖ နဲ့ ပေါင်းသင်းရမလားဆိုပြီး ရစရာမရှိအောင်ဆဲဆိုနေတာ မြင်နေရပါတယ်။ အမှန်တကယ်နအဖကို ဆန့်ကျင်လိုသူတွေဆိုရင် မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေလို ငါ့လူ သူ့လူမခွဲခြားပဲ နအဖနဲ့ လက်တွဲသူမှန်သမျှ ဆန့်ကျင်ရမှာပါ။ ကုလားတွေ လူလိုနေတတ်ချင်ရင် မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေရဲ့ သေးကိုသောက်ပြီး ချီးကိုစားပါ။ ဒီမိုဘက်က ကုလားတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေကို လုံးဝမရှုံ့ချကြပါဘူး။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ကုလားတွေကို ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာလဲမလုပ်ဘူး။ ဒီမိုကုလားတွေက နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲ ရှုံ့ချနေတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ မရိုးသားဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ကုလားဦးရေဟာ မြန်မာပြည်မှာ မနည်းပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သတင်းကို ဘာကြောင့် ထိမ်ချန်ထားကြတာလဲ? မြန်မာအချင်းချင်း စောက်တင်းပြော စောက်ရန်ဖြစ်တာကို ကုလားတွေက အခွင့်အရေးယူပြီး နိုင်ငံရေးနေရာရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီကောင်တွေနေရာရရင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံလုပ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားရေးသတိရှိကြပါ။